Indlu yaseFama yaseGrable Creek (kuMgangatho woku-1)
Indlu yasefama enomtsalane ye-1920 kufutshane nendawo yomtshato kaMiss Mary, kwisikhululo seenqwelomoya saseLongview kwaye ibekwe ngokufanelekileyo kufutshane neLakeport, eLongview naseKilgore. Eli khaya libuyiselweyo liyimbali lipholile kwaye lifanelekile kwiindibano zosapho kunye nokubaleka. Ingalala i-1-6 ngokukhululeka kwaye uya kufuna ukuza apha ngokuphindaphindiweyo! Yiza uphinde utshajwe ngelixa uhleli kwiveranda engaphambili okanye uphumle kwi-tub ye-jacuzzi!
Uya kukuthanda ukuhlala kule ndlu intle yasefama yelizwe. Ikufuphi nesikhululo seenqwelomoya sommandla, indawo yomtshato kaNkosazana Mary, iLongview, iKilgore kunye neLake Cherokee! Senze zonke iinzame ukwenza oku kube yindawo yokuphumla ekhululekile kwaye eyonwabisayo!
IFama yaseGrable Creek yindawo ekhethekileyo kakhulu enamabhoma eepecan kunye nendawo entle yelizwe. Yiza uhlale kwiveranda engaphambili kwaye ubukele umhlaba udlula!
Indlu ihleli kwi-1 1/2 yeehektare kwaye ineendawo ezininzi zokupaka ii-Rv's ezinkulu! Ipropathi yimizuzu ukusuka kwi-I-20 kwaye ifanelekile kubahambi kwaye inokufikelela ngokulula kwiLake Cherokee, eLongview naseKilgore enomtsalane. Zininzi iinketho ezinkulu zokutyela eLakeport kunye nevenkile yegrosari yasekhaya emangalisayo, Skinners ... zonke zikufutshane kakhulu nendlu! Kukwakho neyure enkulu ye-24 yeWal-Mart ekufutshane ukuze ufumane nantoni na onokuyidinga!
Umncedisi wethu uShelley kunye nam sihlala sifumaneka ngetekisi okanye ngefowuni kuyo nantoni na onokuyidinga. Singathanda ukuba usayine incwadi yethu yeendwendwe okanye usithumelele umyalezo malunga nendlela esinokwenza ngayo ukuhlala kwixesha elizayo kube ngcono nangakumbi!
Umncedisi wethu uShelley kunye nam sihlala sifumaneka ngetekisi okanye ngefowuni kuyo nantoni na onokuyidinga. Singathanda ukuba usayine incwadi yethu yeendwendwe okanye usithumele…